बाणिज्य बैंकले दिन थाल्यो सहुलियत दरमा कर्जा, कसरी पाउने ऋण ?
काठमाडौं । सरकारी स्वामित्व रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले सोमबारदेखि सहुलियत दरमा कर्जा दिन थालेको छ । बाणिज्य बैंकमार्फत चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत घोषणा भएको सहुलियत कर्जा कार्यक्रमलाई अभियानको रूपमा लैजाने सरकारले नै घोषणा गरेको थियो ।
पहिलो सहुलियत कर्जा काठमाडौं नैकापमा भीमप्रसाद अधिकारी र एक्मी इन्जिनियरिङ कलेजमा स्नातक तहमा अध्ययनरत छात्रा रजनी हायूलाई प्रदान गरिएको छ ।
अधिकारीले ७लाख रुपैयाँको शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा प्राप्त गरे । उनले क्याटरिङ व्यवसाय सञ्चालन गर्न ऋण लिएका थिए । लोपोन्मुख जातिकी छात्रा हायूलाई इन्जिनियरिङलाई ५ लाख रुपैयाँको उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा दिइएको हो ।
केकेमा पाइन्छ ?
यस्तो सहुलियत कर्जा सात विविध क्षेत्रमा दिइन्छ । व्यावसायिक कृषि कर्जा, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई कर्जा, महिला उद्यमशीलता कर्जा, दलित समुदायका लागि व्यवसाय कर्जा दिइन्छ ।
उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा र भूकम्पपीडितका लागि आवास कर्जाजस्ता बिनाधितो कर्जाको प्रकृतिअनुसार तीन लाखदेखि अधिकतम १० लाखसम्म व्यक्तिगत र सामूहिक जमानीमा ऋण दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
महिला उद्यमशीलताका लागि अधिकतम १५ लाख र व्यावसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी पालनका लागि अधिकतम पाँच करोड रुपैयाँसम्म कर्जा पाइन्छ । १० लाख माथिको कर्जा लिन भने कम्पनी दर्तादेखि ऋण लिने अरू नियमित प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
यस्तो कर्जा सबै वाणिज्य बैंकबाट प्राप्त गर्न सकिने भए पनि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट सबैभन्दा सस्तोमा प्राप्त गर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको आधार दर ६.३३ प्रतिशत छ ।
बैंकहरूले यस्ता उत्पादनशील कर्जामा आधार ब्याजदरमा २ प्रतिशत बिन्दुले थपेर ब्याजदर तय गर्छन् । सरकारले ५ प्रतिशत बिन्दुले ब्याजदर अनुदान दिने भएकाले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट ३.३३ प्रतिशतमा तोकिएका शीर्षकमा सहुलियत कर्जा प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
बैंकहरूले सहुलियत ब्याजदरमा दिने कर्जाको बिमा गराउने व्यवस्था छ । यसका लागि निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगमसँग सम्झौता हुन्छ । सुरक्षणको प्रिमियम सरकारले ७० प्रतिशत र बैंकले ३० प्रतिशत अनुपातमा तिर्छन् । बैंकले उद्यम गर्न चाहाने, नवीन सोच भएका युवालाई कर्जा लिन पहल गर्न आह्वानसमेत गरेको छ ।
काठमाडौँ । धितोपत्र बजारमा शेयर कारोवार मापक नेप्से परिसूचक आज झण्डै ४३ अङ्कले घटेको छ । नेपाल स्...
सुनको मूूल्य अहिले सम्मकै उच्च, हेर्नुस् कति छ आज ?
काठमाडौँ । सुनको मूल्यले आजपनि इतिहासकै नयाँ रेकर्ड बनाएको छ । तोलामा ३ सय रुपैयाँ बढेर तोलामा ९९...
डिजेल र पेट्रोलमा दुई रुपेैयाँ मुल्य बढ्यो
काठमाडौँ । नेपाल आयल निगमले डिजेल, पेट्रोल र मट्टितेलमा प्रतिलिटरमा दुई रुपैयाँ मुल्य बढाएको छ । ...
फेरि बढ्यो इन्धनको मुल्य, अब पेट्रोलको मुल्य १०४ रुपैयाँ पर्ने
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गरेको भन्दै इन्धनको मूल्य प्रतिलिटर...
सुनको मूल्य इतिहासकै उच्च, तोलाको कति पुग्यो ?
काठमाडौं । नेपाली बजारमा आज (शुक्रबार) छापावाल सुनको मूल्य तोलाको ९९ हजार ३०० रुपैयाँ पुगेको छ। न...
काठमाडौँ । धितोपत्र बजारमा शेयर कारोवार मापक नेप्से परिसूचक साढे सात अङ्कले वृद्धि भएको छ । नेपाल...